Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Netherlands abanyela na mkpọchi ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọchịchị nke Netherlands mara ọkwa na malite na Mọnde, Nọvemba 29, a ga-emechi ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ niile n'oge elekere abalị na ụlọ ahịa ndị na-adịghị mkpa ga-emechi site na elekere ise ruo elekere ise nke ụtụtụ. A ga-achọ ihe mkpuchi n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, a na-agbakwa onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ n'ụlọ ka ọ mee ya.
Gọọmentị Dutch kwalitekwara mmachi ọrịa ahụ ọzọ, ka mba ahụ na-alụ ọgụ na-emebi emebi COVID-19 na ụlọ ọgwụ mba na-eche ọnọdụ 'koodu ojii' ihu.
N'ịkwenye na ọnụọgụ ọnụọgụ ọhụrụ nke nje na-egbu egbu 'dị elu, dị elu, kachasị elu' kwa ụbọchị, Prime Minista Dutch Mark Rutte kwuru na "obere mgbanwe ndị gara aga," gụnyere iweghachi ihe mkpuchi ihu, ezughị iji kwụsị ndekọ ahụ. - agbaji COVID-19 ife.
N'agbanyeghị 85% nke ndị okenye bi na mba a na-agba ọgwụ mgbochi, mmụba dị na Netherlands e kwuru na ọ kacha njọ na Western Europe.
N'ime izu gara aga, edebanye aha ihe karịrị ọrịa 20,000 kwa ụbọchị, na-amanye ntuziaka ndị gọọmentị nyere ụlọ ọgwụ ka ha yigharị ọrụ niile na-abụghị ihe mberede, gụnyere nhazi maka ndị ọrịa kansa na ọrịa obi. Ebe akwa ọzọ achọrọ maka ndị ọrịa COVID-19 na ngalaba nlekọta ahụike, ebufela ụfọdụ ndị ọrịa maka ọgwụgwọ na Germany.
Ntọhapụ ngalaba na akwa ICU maka ndị ọrịa butere ọrịa coronavirus, usoro ahụike obodo na-akwado maka ọnọdụ 'koodu ojii', nke enwere ike ịmanye ndị dọkịta ịhọrọ onye dị ndụ ma nwụọ, n'ihi enweghị akụrụngwa anụ ahụ iji gwọọ onye ọ bụla chọrọ. nlekọta. Peter Langenbach kwuru, "ụlọ ọgwụ na-eche nhọrọ ndị siri ike dị otú ahụ ihu," onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụike na Rotterdam.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ COVID-19 nọ na-eyi egwu ịkagbu usoro ahụike Dutch n'ọnwa a, ụdị achọpụtara ọhụrụ, super-mutant Omicron, na-agbakwunye naanị n'ọnọdụ adịghị mma.
Achọpụtara nke mbụ na Botswana na South Africa, ụdị B.1.1.529 nke coronavirus bụ ugbu a na-ekwupụta ọkwa dị iche iche nke nchegbu site na Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO).
Ụjọ na-eto eto nke ụdị Omicron kpalitere mmachibido njem njem zuru ụwa ọnụ, gụnyere n'ime Netherlands, ebe amachibidoro ụgbọ elu si South Africa na ọtụtụ mba ndị gbara ya gburugburu na Fraịde. Ọ na-abịa n'akụkụ akụkọ nke nsonaazụ ule Covid-19 sitere na ndị njem si South Africa bịarutere nso nso a n'ọdụ ụgbọ elu Schiphol nke Amsterdam. Dịkarịa ala, 61 n'ime mmadụ 600 bịarutere bụ ihe dị mma maka nje a.